Borussia Dortmund oo laad kusoo dhufutay dalab ay Man United ka gudbisay ciyaaryahankeeda Mkhitaryan. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Borussia Dortmund oo laad kusoo dhufutay dalab ay Man United ka gudbisay ciyaaryahankeeda Mkhitaryan.
Borussia Dortmund oo laad kusoo dhufutay dalab ay Man United ka gudbisay ciyaaryahankeeda Mkhitaryan.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 16-06-16 12:33 PM Sida ay tilmaamayaan warbixino dhawr ah oo ka imaanaya Ingiriiska, Manchester United ayaa wajigabax kala kulantay kooxda Borrusia Dortmund markii ay dalab ka gudbiyeen kubad sameeyaha reer Armenia Henrikh Mkhitaryan.
Xidigii hore Shakhtar Donetsk ayaa u sheegay kooxdiisa inuusan heshiis cusub u saxiixi doonin taasna waxey fududeyn kartaa in Dortmund ay xidigaan iibiso madama dhamaadka xagaaga bilaaban doona uu si xor ah kaga tagi karo.
Dortmund waxey lumisay laba xidig oo muhiim ah madama Hummels uu ka dagay Bayern Munich, halka Ilky Gondogan uu ku biiray kooxda Manchester City, balse wey ku qasban tahay iney ogolaato iibinta Henrikh Mkhitaryan madama ay ku qasaari doonto hadii ay kusii madax adeegto heysashadiisa.
Si kastaba Henrikh Mkhitaryan waxaa sidoo kale xiiseynaya kooxda Arsenal, balse Jose Mourinho oo abaabulaya dhismaha koox weyn oo awood leh ayaa u hanqal taagaya saxiixa xidigaan heerka caalami.
Mirror ayaa qortay in Mourinho uu 19-Malyan Oo Pound dalab ah miiska u saaray kooxda Dortmund, balse waa lagu gacan seyray madama kooxda ka dhisan Signal Iduna Park ay u aragtay qiimo jaban.
Ugu dambeyntiina Madaxa fulinta kooxda Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaad xaqiijiyay in Mkhitaryan ay iska iibinayaan madama uu diiday inuu heshiiska kordhiyo wuxuuna yiri: “Muddo afar bilood ah ayaan wadahadal kula jirnay Mkhitaryan si uu heshiis cusub u saxiixo, balse waan ogaanay in xidigaan uusan heshiiska kordhineynin”